कोरोनाकालमा पनि दसैंको अभिन्न अंग बनेको नयाँ नोट « AayoMail
कोरोनाकालमा पनि दसैंको अभिन्न अंग बनेको नयाँ नोट
2021,12 October, 6:26 pm
दसैं तथा तिहारजस्ता विशेष चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा स–साना बालबालिकादेखि युवावर्गसम्ममा निकै उत्सुकता देखिन थाल्छ। परिवारका सबै सदस्य एकसाथ जम्मा भएर मिठोमसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने, घुम्न जानेदेखि विविध क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुने समय हो यस्ता चाडपर्व। त्यसो त अहिले नेपाली समाजको आर्थिक अवस्था र दसैं मनाउने परिपाटीमा ठूलो परिवर्तन पनि आइसकेको छ।
दसैं नजिकिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा नजानिँदो पारामा निकै ठूलो भीडभाड जम्मा भइसक्छ। नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारण बिहानैदेखि लाइनमा बस्ने गर्दछन्। अन्य बैंकहरुमा पनि काम लिएर पुगेका व्यक्तिहरुको चासोको विषय बनेको हुन्छ दसैंको नयाँ नोट। बैंकमा पुग्ने हरेक व्यक्तिले एक पटक अवश्य सोध्ने प्रश्न हुनेगर्छ–नयाँ नोट आएको छैन? कहिलेदेखि बाँड्ने हो?
थापाथलीस्थित राष्ट्र बैंकको भवनबाट नयाँ नोट वितरण हुने गरेको थियो। २०७२ को भूकम्पका कारण उक्त भवन भत्किएकाले निर्माण कार्य हाल जारी छ। जसका कारण यस वर्ष भने नयाँ नोटको वितरण बालुवाटार शाखाबाट असोज ४ गतेदेखि नै सुरु भएको थियो। अन्य विभिन्न बैंकदेखि व्यक्तिहरु सबै दसैंको नयाँ नोट लिन राष्ट्र बैंक पुग्ने गर्दछन्। केही वर्षयता दसैंमा नयाँ नोट नै चाहिन्छ भन्ने ‘लहड’ नेपालमा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि दसैंको छेको पारेर हरेक वर्ष बजारमा ठूलो मात्रामा नयाँ नोट पठाउने गरेको छ। अन्य समयमा भन्दा यस समय नयाँ नोट ठूलो मात्रामा बाहिरिने गर्छ।
कोरोना कहरमा पनि नयाँ नोट
राष्ट्र बैंकले विगतमा झैं यस वर्ष पनि प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले नयाँ नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण केही घटेको देखिए पनि यसको जोखिम कायमै छ। यस्तो अवस्थामा पनि सर्वसाधारणले लाइनमा बसेरै नयाँ नोट साटे। एक प्रकारले हेर्दा दसैंको समयमा हरेक नेपालीको अभिन्न अंग बनिसकेको छ नयाँ नोट।
यता राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट साट्नका लागि कुनै प्रकारको पनि छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइदैन। सामान्य भौतिक दूरीमात्रै कायम गरेको देखियो। कोराना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नयाँ नोट उपलब्ध गराएको थियो।
३५ अर्बका नयाँ नोट बजारमा
राष्ट्र बैंकले यस पटक दसैंलाई लक्षित गर्दै ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरका नयाँ नोट बजारमा पठाएको थियो। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट नयाँ नोट लगिसकेका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षका दसैं तिहारमा ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ नोट बजारमा पठाउँदै आएको छ। जसमध्ये सर्वसाधारणका लागि मात्रै १५ अर्बको हाराहारीमा नयाँ नोट सटही हुनेगरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ५, १०, २०, ५० र १ सय दरका नयाँ नोट सटही गर्दछ।
दसैंमा किन निकाल्छ राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट? के दसैं र नयाँ नोटको सम्बन्ध छ ?
यसको सोझो उत्तर हो–छैन। तर, अहिले मनोविज्ञान कस्तो भइसकेको छ भने मानिसहरु दसैं आएपछि नयाँ नोटको व्यवस्थापनमा लाग्न थालिहाल्छन्।
दसैं र नयाँ नोटको सम्बन्ध भनेको नयाँ कपडा र दसैं भनेजस्तै मात्र हो, जसको आपसमा खासै केही सम्बन्ध हुँदैन। पैसा तिरेर सजिलै खरिद गर्न सकिने कपडा दसैंमा अनिवार्य लागाउनैपर्छ भन्ने होइन।
त्यसो त दसैंमा नयाँ कपडा खरिदको क्रममा पछिल्लो समय केही कमी नआएको भने होइन। त्यसैगरि नयाँ नोटसँग पनि दसैंको केही सम्बन्ध नरहेको प्रवक्ता ढकाल बताउछन्। उनी भन्छन्–इस्टमित्र र बालबालिकालाई दक्षिणा दिँदा नयाँ नोट दिने प्रचलन बढेको हो।
एकप्रकारले हेर्दा नयाँ नोट दसैं संस्कृतिको अभिन्न अंग नै बनेको छ। यसबाहेक दसैं र नयाँ नोट वा राष्ट्र बैंकको त्यस्तो ठूलो सम्बन्ध छैन।
के दसैंमा मात्र छापिने हो नयाँ नोट?
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको दसैंको समयमा अत्याधिक मात्रामा नयाँ नोट बजारमा पठाउने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले दसैंमा जति नयाँ नोट वर्षको अरु कुनै पनि समयमा बजारमा नपठाउने गरेको ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार, दसैंको समयमा बजार चलायमान रहने हुँदा यस समय राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा धेरै नयाँ नोट बजारमा पठाउने गर्छ।
दसैं आएलगत्तै बैंकहरुमा निक्षेप निकै बढ्ने गर्दछ। यसका साथसाथै किनमेलका लागि पैसा पनि धेरै बजारमा भित्रिने गर्दछ। यही मौका छोपेर राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै मात्रामा नयाँ नोट पठाउँछ। नेपाली नोटको आयु लामो समय नहुनाले पुराना नोट सङ्कलन गरि बजारमा नयाँ नोट बिस्तार गर्नु निकै आवश्यक पनि छ। अन्यथा पुरानो नोटका कारण मानिसहरुमा विभिन्न प्रकारको रोगसमेत निम्त्याउन सक्ने बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
पुरानो नोटका कारण मानिसमा क्यान्सरजस्ता रोग निम्तनसक्ने सम्भावना रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष पुराना नोट सङ्कलन गरि जलाउने गरेको छ। यसरी बढीभन्दा बढी पैसा चलायमान हुने दसैंजस्तो समयमा भने राष्ट्र बैंकले बढी मात्रामा नयाँ नोट निस्कासन गर्ने गरेको हो।
यसको अर्थ के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु समयमा पनि नयाँ नोट बैंकहरुमा सर्कुलेट त गरिरहेको हुन्छ, तर दसैंमा चाहिँ उसले निकै धेरै नयाँ नोटहरु निस्कासन गर्छ। यही समयमा नयाँ नोटको माग बढी हुने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकले यो समयमा धेरै नयाँ नोट बजारमा पठाउने गरेको हो। त्यसरी पठाउने नयाँ नोट अहिले नै छापिएको भन्ने चाहिँ हुँदैन। ती नयाँ नोट निकै पहिले छापिएका पनि हुनसक्छन् जुन राष्ट्र बैंकको स्टकमा राखिएको हुन्छ।
राष्ट्रिय चाडपर्वमा नयाँ नोटः भएन प्रभावकारी
राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम गर्न राष्ट्रिय चाडपर्वहरुमा पनि नयाँ नोट सटही गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले ठूला चाडपर्वहरु दसैं तथा तिहारबाहेक जनै पूर्णिमा, माघे संक्रान्ती, ल्होसार, इन्द्रजात्रालगायत अन्य विभिन्न चाडपर्वमा पनि नयाँ नोट साट्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका बेला नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। तर दशैँमा जस्तो नयाँ नोटको आकर्षण अन्य चाडबाडमा नभएकाले निकै कम मात्रै सटही हुनेगरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ।‘दशैंको समयमा नयाँ नोट साट्नका लागि बैंकमा अत्याधिक भिड हुने गरेको छ,ढकाल भन्छन्, तर केही वर्ष यतादेखि हामीले त अन्य राष्ट्रिय चाडवाडमा पनि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएका छौं। अन्य समयमा भने सर्वसाधारणहरु खासै नयाँ नोट सटहीका लागि आउदैँनन्।’ दशैंमा नै नयाँ नोट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण होला सायद अन्य राष्ट्रिय चाडपर्वमा नयाँ नोट प्रभावकारी हुन सकेको छैन–ढकालले थप बताए।
नेपाली नोटको आयु कति?
राष्ट्र बैंकले निस्कासन गर्ने नोटको आयु धेरै लामो नहुने बैंक स्वयंले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँ दरका नोटको आयु करिब २ वर्षमात्रै हुने गरेको छ। त्यस्तै ५ सय र १ हजारका नोटको आयु साढे तीन वर्ष हुने गरेको छ। यस अवधिसम्म नोटको प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रकारको समस्या नपर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। तर सो अवधि पश्चात भने नोट प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले आयु सकिएका त्यस्ता पुराना नोट संकलन गरि जलाउने गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छाप्दा ३ वर्ष र ३ महिनाको मागको प्रक्षेपण गर्ने गरेको छ। सोही प्रक्षेपणअनुसार नयाँ नोट छाप्न राष्ट्र बैंकले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर विदेशी छापाखानामा पठाउँछ।विभिन्न दरका नोट विभिन्न कम्पनीबाट छापिएका हुन्छन्।नयाँ नोट छाप्न प्रतिपिस डेढ रुपैंयादेखि दुई रुपैंयासम्म लाग्ने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।